Ungayisetha kanjani i-Xbox usebenzisa Ucingo nge aka.ms/xboxsetup? - Ukudlala
Naphezu kwakho konke okuhle, ukuvuselela i-firmware yakho ye-Xbox kungaba ngumsebenzi owesabekayo. Uma ungazi ukusebenzisauhlelo lokusebenza lwedijithali futhi ulixhumanise nokusethwa kwe-Xbox yakho, uzibeka engcupheni yokulahleka kwedatha. Ngaphezu kwalokho, ungahle ubhajwe esikrinini ingunaphakade.
Kulesi sihloko, uzofunda konke mayelana nohlelo lokusebenza lwedijithali lwe-Xbox nokuthi kukuzuzisa kanjani. I-athikili izogqamisa amaphutha namaphutha ajwayelekile ukuze uwaxazulule kahle. Ngakho-ke, ake siqale!
Ungahle wazi kahle ukuthi kukhona uhlelo lokusebenza lwe-Xbox olusemthethweni lwama-smartphones. Isebenza ngamapulatifomu we-Android ne-iPhone ngokufanele.I-Xbox app iza nezici ezahlukahlukene nokuzilibazisa. Noma kunjalo, kudinga ukuthi ube nekhodi yokusetha ukuyifinyelela ngokuphelele kwi-smartphone yakho. Ngenkathi ulanda uhlelo lokusebenza lwe-smartphone yakho, ikhodi izokukhanyisela. Kubalulekile ukuqaphela le khodi phansi.
Iwebhusayithi esinikezwe ngenhla iyisango lokusetha uhlelo lwakho lwe-Xbox futhi uyixhume nekhonsoli yakho ngokwamanani. Isebenza futhi njengenketho yezandla ukuthi ubuyekeze i-Xbox yakho bese ufaka i-firmware yakamuva. Ngakho-ke, lapho uqala ukusetha i-Xbox yakho, izokukhombisa ikhodi kanye nesixhumanisi.
Kodwa-ke, ayicacisi abasebenzisi ukuthi kufanele babhale phansi le khodi njengoba kuzodingeka bayisebenzise kamuva. Iningi labantu lisebenzisa isithwebuli sekhodi se-QR noma isixhumanisi, sicabanga ukuthi sizobanikeza ukufinyelela. Ngenxa yalokho? Uma usuqedile ukufaka uhlelo lokusebenza, icela ikhodi efanayo. Manje, uma ungayibhalanga phansi, ayikho indlela yokuthi ungayithola. Noma ikhona?
INintendo Shintsha vs Shintsha i-Lite
Ungayithola Kanjani Ikhodi?
Indlela eqinisekile yomlilo yokubuyisa ikhodi ukukhipha uhlelo lokusebenza efonini yakho nokuvuselela inqubo yokufaka. Cishe izokukhombisa futhi ikhodi ongayibhala phansi. Ungayifaki kabusha i-Xbox embonini. Lokho kuzokuholela ekulahlekelweni yiyo yonke idatha ebalulekile, futhi i-firmware ingahlala ivuselelwa.
Kuthiwani Uma Ukufaka kabusha kungasebenzi?
Ngemuva kwalokho ithemba lakho lokugcina ukuxhumana nokusekelwa kwamakhasimende. Yize isisombululo esinikezwe ngenhla sisebenza kahle kakhulu esikhathini esiningi, uzokwazi ukufinyelela kuhlelo lokusebenza kahle. Yebo, kuyaqondakala ukuthi i-Xbox kufanele icacise kahle le mihlahlandlela yokusetha.
Ungayisetha kanjani i-Xbox ngohlelo lwakho lokusebenza?
Kuyinqubo engenamthungo, kepha kwesinye isikhathi ungahle udideke ngokuthi kufanele wenzeni kuqala. Nasi umhlahlandlela ogcina inqubo ilula ukulandela:
Okokuqala, kuzodingeka uthole ikhodi obekade ufunda ngayo kakhulu. Ngalokho, kufanele uvakashele iwebhusayithi, aka.ms/xboxsetup . Ngenye indlela, ungasebenzisa isithwebuli sekhodi se-QR kusikrini sokusetha se-Xbox ukufinyelela isayithi.
Uzothola ikhodi efonini yakho. Yibhale phansi, bese uya esitolo sokudlala noma kuwebhusayithi esemthethweni ku landa uhlelo lokusebenza lwe-Xbox . Qiniseka ukuthi ubhala le khodi phansi.
Lapho uhlelo lokusebenza selufakiwe kudivayisi, yivule, bese uqhubeka nokusetha. Ngena ngemvume nge-Xbox ID yakho esemthethweni. Izokucela ukuthi ufake ikhodi. Uma uyiqaphele phansi, lokhu kufanele kube umoya.
Manje izokubuza imibuzo embalwa ongayikhetha nokusetha. Landela.
Uma i-Xbox yakho isethiwe, izokucela ukuthi ufake izilungiselelo kuhlelo lokusebenza. Kuqinisekise, futhi uzoba nokuvumelanisa kohlelo lokusebenza ne-Xbox console yakho.
Kungani kufanele usethe futhi uvumelanise uhlelo lwakho lwedijithali ne-Console?
Kunezici ezingenakubalwa nokutholakala kalula okuza nohlelo lokusebenza olusemthethweni lwe-Xbox. Kukusiza ukuxhumana nabangane bakho kanye nomphakathi. Ungalandelela imidlalo yakho bese uthola lonke ulwazi olubalulekile. Ngokufana nehabhu eyakhelwe ngaphakathi yeXbox, uyakwazi ukufinyelela izinketho ezinjengokuthenga imidlalo nokunye okunjalo. Sekukonke, kufana nepulatifomu lamafu kuphela le-Xbox console yakho exhuma ne-smartphone yakho kalula.
Yini Ongayenza Nge-Xbox App?
Ungalawula i-Xbox console yakho ngaphandle kokudinga isilawuli. Kukuvumela ukuthi uzulazule kukhonsoli noma usebenzise amagama angukhiye nezinye izici ezifanayo ngocingo lwakho. Ngakho-ke, ilahla isidingo sezilawuli zekhonsoli edla isikhathi.
Uhlelo lokusebenza luza nesilawuli semidiya esikulethela okunezinhlobonhlobo zezici ezifana nokurekhoda amavidiyo, izithombe-skrini, nokunye okuningi. Ngenye indlela, ungasebenzisa uhlelo lokusebenza ukudlala noma ukumisa kancane umdlalo. Njengoba i-Xbox isekela ezinye izinhlelo zokusebenza manje, ikakhulukazi ukusakaza njenge-Netflix, ungayifinyelela nge-smartphone yakho bese uyiqala esikrinini esikhulu.
Ekuqaleni, kufana nokuba nesilawuli kude se-Xbox yakho esihlukanisa nesilawuli segeyimu.
Ungathwebula izithombe-skrini, urekhode izikrini, bese ugcine lezi ziqeshana. Akunasidingo sokuthi uye kukhonsoli ukuze usebenzise lesi sici. Uma okwamanje uqhuma ukudlala lo mdlalo, ungasebenzisa ngokushesha uhlelo lwakho lokusebenza lwe-smartphone yakho ukuqala ukuqoshwa kwesikrini.
Ngokufana ne-Xbox PaaS nokudlala kwamafu, ungathenga umdlalo wekhonsoli yakho ngohlelo lokusebenza lwefoni. Ngakho-ke, akudingeki ukuthi ube kukhonsoli yakho yokudlala 24/7 ukuthola imidlalo. Uma usesikoleni, usebenza, noma uya emsebenzini, usengalandelela amadili nemidlalo okufanele uyithenge.
I-LFG ne-Live Club:
Uthola amaqembu we-Looking For Group ne-Xbox Live akwenza ukwazi ukuxhumana nabanye abadlali nabasebenzisi bohlelo lokusebenza lwe-Xbox. Ngaphezu kwalokho, ungaxhuma futhi udlale nabadlali kahle kukhonsoli yakho ye-Xbox. Uhlelo lokusebenza alunazo izici zalo zokuxhumana. Isici sokuthumela imiyalezo sikuvumela ukuthi uqondise (noma ngasese) abantu bomlayezo ukuxhumana nabo.
Sethemba ukuthi lo mhlahlandlela wenza kube lula kuwe ukuthi ulandele inqubo yokusetha bese wenza kusebenze uhlelo lokusebenza lwedijithali. Khumbula, inhloso ukuvuselela i-Xbox ngesandla bese uyisetha ngohlelo lwakho lokusebenza lwedijithali. Lo mhlahlandlela ungabalulekile kuma-consoles amadala njengoba i-Xbox ikulethela njalo ikhono lokudlala ngokusebenzisa noma iyiphi ikhonsoli nokuhambisana okuphelele nohlelo lokusebenza, noma kuziduduzi ezindala nezintsha. Jabulela futhi ujabulele imidlalo enhle kakhulu!
I-PS5 vs Xbox Series X - Yikuphi okungcono kakhulu?
khokha futhi ubuke ama-movie online
uhlelo lokusebenza lomculo oluhamba phambili lwe-android
i-ipad emulator yamawindi 7
Amakhodi we-psn ahlala esebenza
movie mahhala ku-inthanethi ngaphandle kokulanda
amawebhusayithi wokusakaza wamahhala wamahhala ngaphandle kokubhalisa